Ukuphumelela ezifundweni, ukukhathazeka, ukukhuthazeka nokunakwa: yini ebaluleke ngempela ukwenza kahle esikoleni? - Ukuqeqeshwa kwengqondo
Ulapha: Ikhaya » Izihloko » yokufunda » Ukuphumelela ezifundweni, ukukhathazeka, ukukhuthazeka nokunakwa: yini ebaluleke ngempela ukwenza kahle esikoleni?
Amakhono ezifundo angaba nomthelela omkhulu ekutholeni umsebenzi, ekuthuthukiseni isimo sakho sezezimali nokufinyelela ezingeni eliphakeme lemfundo. Phakathi kwamakhono esikole, ukufunda nezibalo yizo ezinomthelela cishe kuzo zonke izigaba zempilo yomfundi. Izifundo eziningana zizamile ukukhomba okuguqukayo okuhlobene nempumelelo kulezi zindawo ezimbili.
Ocwaningweni lwakamuva, uGeary nozakwabo (2020)  baphenye ubudlelwano phakathi kokuhlukahluka okuhlukile namakhono okufunda nezibalo eqenjini labafundi bebanga lesibili nelesithathu lama-315. Bonke ababambiqhaza bahlolwe nge:
Ukuhlolwa kwe-IQ (ama-Raven matrices nolwazimagama)
Ukuhlolwa okuhlobene nokufunda kanye nezibalo (ukusebenza kwamanani nokuhlolwa kokufunda)
Olunye uvivinyo lokuqonda (ubude bamadijithi, uhlu lwamagama okufanele ulufunde ngekhanda, Ukuhlolwa kwezifundo)
Ngaphezu kwalokho, inkuthazo yokutadisha (ukulinganisa ukubaluleka kwezihloko ezizofundwa), ukukhathazeka ngezibalo nokuziphatha kokunaka kuphenyiwe.
Ukuhlakanipha (okuhambisana nenkumbulo esebenzayo) kube nomphumela ipharamitha eyinhloko yokubikezela isivinini nokunemba kokufunda namakhono wezibalo. Ukuziphatha kokunaka, ngakolunye uhlangothi, kubonakala kunendima ebaluleke kakhulu kwi-mathematics kunokufunda. Ukunganakwa, ngokwenza, kungaholela ekufundeni kancane kwezibalo. Okunye ukucabanga ababhali abeza kukho ngemuva kokuhlaziya imininingwane ukuthi amakhono ezindawo angakhuphula ukusebenza kokufunda kwezibalo; ngaphezu kwalokho, ukuhlolwa kwe-visuospatial (njengokuhlolwa kweCorsi) kungasiza ukuqonda umehluko wempumelelo yezibalo phakathi kwezingane ezahlukahlukene. Imemori yesikhathi esifushane yomlomo ibe ukuphela kwesibikezelo esihlobene nokufunda (ukunemba nejubane), kepha hhayi izibalo.
Amakhono okuqonda, ukunaka ekilasini kanye nentshisekelo yezifundo esifundweni kubonakala zihlobene kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, ukunganakwa kungabangelwa ukuthi umfundi onenkinga yokufunda kungekudala noma kamuva ulahlekelwa yintshisekelo esifundweni; ngaphezu kwalokho, abafundi abanamakhono aphezulu okuqonda batshala isikhathi esiningi ekufundeni kwesikole ngoba banobunzima obuncane. Ngokombono, kuyadingeka ukwenza izifundo zithakazelise futhi kube lula ukuziqonda ukugcina ukunaka kwabafundi; Kutholakale ukuthi abafundi abanezinkinga zombili zezibalo kanye nezokufunda basengozini enkulu yokuba nezinkinga zemfundo nezomsebenzi impilo yabo yonke.
Kunokuhlukahluka okuningi okungahambisana nobunzima bezifundo (njengendawo umuntu ahlala kuyo, njll.). Ngaphandle kwale mikhawulo, lolu cwaningo luvula izindawo ezintsha ezingaba khona zocwaningo ukuqonda ubunzima bezemfundo ngaphandle kobufakazi obulula obuhlobene nokufunda kwesikole.
UGeary David C., uHoard Mary K., uNugent Lara, u-alnal Zehra E., uScofield John E., Ubunzima Bokufunda beComorbid Ekufundeni naseMathematika: Indima Yezobunhloli kanye Nokuziphatha Okusezingeni Elinakile, Imingcele Yezobuchwepheshe, 11: 3138, 2020
Attenzione, Ukufundwa, wezibalo, nesisusa, impumelelo ezifundweni
Ukuphumelela ezifundweni, ukukhathazeka, ukukhuthazeka nokunakwa: yini ebaluleke ngempela ukwenza kahle esikoleni?2020-12-212020-12-21http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/12/boys-286245_1280.jpg200px200px
Ukukhathazeka kokuhlolwa nemiphumela yakoUkufunda, Imibhalo, Ukuziphatha, Indlela Yokufunda